4 Tallaabooyinka Access iPhone kaabta Data la Dr.Fone
> Resource > iPhone > Helitaanka iPhone kaabta: 4 Tallaabooyinka Access iPhone kaabta Data la Dr.Fone
Sidee ayaan si toos ah u heli kara Lugood ee kaabta faylasha?
Waxaan lahaa 3GS iPhone iyo shalay ayaan lumay. Badan xiriirada, sawiro iyo fariimaha telefoonka inaan. Waan ogahay Lugood gurmad on my Mac ka mid ah dhammaan macluumaadka kuwa, waxaan halkan ka codsanayaa in ay jirto si kasta oo ay u helaan gurmad iPhone on my Mac ama aan. Mahad badan.
Sababtoo ah siyaasadda Apple ee, laguuma ogola in ay helaan gurmad Lugood si toos ah aad Mac xitaa haddii aad u ogaato meesha ay tahay. Haddii aad dhabtii doonaysid si ay u helaan gurmad iPhone oo akhriyey aad Mac, waxaad u baahan doontaa caawimo ah ee barnaamijka dhinac saddexaad ah.
Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery for Mac) ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery for Windows) waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu fiican si ay u gutaan baahidaada. Tani qalab kama dambaysta ah iskaan karo iyo Macdan files kaga imaanayo Lugood. Barnaamijkan waxa si buuxda u la jaan qaada Windows OS iyo Mac OS. Hadda waxa aad heli kartaa ilaa 11 nooc oo file ka gurmad iPhone. Maxaa ka sii fiican, wuxuu kaa badbaaadin karaa gurmad iPhone faylasha on your computer loogu isticmaalo mustaqbalka.
Download Wondershare Dr.Fone ee macruufka hoos ku hadda.
Hayaan Access iPhone in 4 tallaabooyin
Haddaba ee gurmad helaan iPhone la Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac). Dadka isticmaala Windows fadlan isku day version Windows si loo farsameeyo tallaabooyinka la mid ah.
Tallaabada 1. Ku rakib iyo abuurtaan Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac). Waxaa aad arki doonaa laba hababka soo kabashada: kabsado Device macruufka iyo soo kabsado Lugood ee kaabta File. Si aad u hesho gurmad iPhone, fadlan dooro "kabsado gurmad Lugood" mode. Halkan waxa aad u socoto inay soo saaro gurmad iPhone. Fadlan dooro gurmad aad rabto si ay u helaan oo guji "Scan" in ay sii wadaan.
Tallaabada 2. Marka uu dhamaado scan, ku jira oo dhan ee aad gurmad iPhone loo qaybaha sida "Roll Camera", "Farriin", "Contact", iwm Waxaad iyaga ku eegaan karo sida aad u doonayo ku qoran doonaa. Haddii aad rabto in aad soo saaro files ka iPhone dib oo ay u sii on your Mac si aad u akhriyi kartaa waxayna u isticmaalaan straightly, waxaad riixi kartaa "Ladnaansho" iyaga badbaadiya aad Mac.
1 Indeed, Wondershare Dr.Fone ee macruufka waa sida barnaamij soo kabashada xogta iPhone. Waxaad si fudud u soo kaban karto, files kaga imaanayo Lugood. Waxa kale oo aad xitaa soo kaban karto, files si toos ah uga iPhone 5 / 4s / 4 / 3GS.
2 version maxkamad wuxuu kuu ogol yahay oo keliya iPhone aad si scan iyo dib u eego faylalka marsiiyey. Haddii aad rabto in aad soo saaro faylasha iyo badbaadin on your Mac, aad u baahan tahay si aad u hesho nooca buuxda.
Sida loo Dayactir dillaac iPhone Screen
Sidee si ay u gudbiyaan iPhone Videos in an External Hard Drive
3 Hababka si hagaagsan iPhone la Muuqaalka
Best iPhone File Manager in Maamul files iPhone
Tababare iPhone Music: Dhoofinta / Import / Delete Music on iPhone